Parution du Mercredi, 20 Octobre 2021
Tous Actualités Politique Taratasy hoan'i jean Edito Sport Loisirs Fampianarana kolontsaina Sosialy Mahafinaritra
Archive du 22-juin-2021
Rinah Rakotomanga Lasa mpanolontsain ny Masoivoho any Frantsa
Androany 21 Jona 2021 nandray soamatsara ny asa maha Mpanolontsaina eto anivon ny Masoivohon i Madagasikara eto Paris eto Frantsa ny tenako rehefa nahazo ny taratasy nanendry ahy tamin ny 08 Jona 2021
Hamaky ny tohiny
Zatra miala bala sy manadio tena
Marina fa mbola eo ny valanaretina coronavirus, saingy tsy mitovy amin’ny teo aloha ny heriny sy ny tanjany eto amintsika.
Hiditra amin’ny 26 jona faharoa isika Aiza ihany ilay hoe fiverenan’ireo Nosy Malagasy ?
Tany amin’ny taona 2019 no nanaovan’ny Filoha ankehitriny Andry Rajoelina fanamby fa mialohan’ny 26 jona hankalazana ny fetin’ny fahaleovantena no hahazoantsika ny Nosy Malagasy,
Patrick Raharimanana “Ny Fanjakana ihany no mampiaka-bidy ny PPN”
“PPN, ny fanjakana ihany no mampiakatra ny vidiny”, io fanehoan-kevitra nentin’Atoa Patrick Raharimanana omaly eo anatrehan’ny fidangan’ny vidin’ny entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro ankehitriny
Tolo-pehin-kevitra momba ny trafikam-bolamena Nihemotra indray fandinihan’ny Antenimiera azy
Tokony ho natao omaly alatsinainy ny fandinihana sy fandaniana io volavolana tolo-pehin-kevitra momba ny fanondranana volamena antsokosoko,
Raharaha Volamena 73,7 kg: Araka tapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra dia tsy maintsy atao ny fomba rehetra hamerenana ilay volamena milanja 73,7kg nakany ivelany ao amin` ny banky foibe eto Madagasikara. Hisy ny fifandraisana sy fiaraha-miasa amin’ny lafiny rehetra amin’ny fitondrana Afrikana Tatsimo.
PAC: Nampiakatra ny raharaha fanondrana volamena eny eny anivon’ny PAC na ny Pôle Anti-Corruption ny Fanjakana Malagasy. Hohenjehina ary hiharan’ny sazy ireo rehetra izay mikasa ny hanelanelana na hisakantsakana amin’ny fanatanterarahana izany fampodiana azy ireo izany eto an-tanindrazana. Tsy maintsy hampiharina ny lalàna, hoy ny fampitam-baovao.
Harena azo amin`ny tsy ara-drariny: Hijoro tsy ho ela ny « agence de recouvrement des avoirs illicites » araka ny efa voafaritra ao anaty didy hitsivolana mikasika izany.
Rivodoza: Hisy mpamatsy vola vonona handoa ny saram-piantohana tsy maintsy aloa amin’ny ARC mba hiantohana izay mety ho vokatry ny rivodoza 2020-2021 ho fanampiana ny Fanjakana Malagasy raha misy ny loza. Nampahafantarin’ny Minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny faneken’ny KFW, izay mpamatsy vola avy amin’ny Governemanta alemana, ny fandraisana an-tanana izany saram-piantohana izany izay mitentina 2 tapitrisa dolara.
OTIV BOENY: Araka ny tapaka teo anivon` ny filankevitry ny minisitra omaly dia ny fanjakana amin’ny alalan’ny Paositra Malagasy no hanampy amin’ny famerenana amin’ny ampahany ny tahirim-bola napetrak’ireo mpikambana voafitaka tao anatin’ny fampindramam-bola madinika OTIV BOENY. Tsy maintsy mamerina ny vola nahodiny ireo rehetra mpitantana sy mpiasa voarohirohy tamin’izany ary hotohizana ny fanenjehana azy ireo araka izay voafaritry ny làlana.
Fitakian’ny ENS : Omaly alarobia, nidinan’ny mpianatra an-dalambe niaraka tamin’ny sorabaventy ihany, dia navotsotra ireo telo lahy voasambotry ny mpitandro ny filaminana taorian’ny fandravana ny sakandalana nataon’ireo mpanao fitakiana ny handraisana ho mpampianatra avokoa ireo vita fianarana tao amin’ny ENS (Ecole Normale Supérieure) Ampefiloha. Nisy ny fifandraisana teo amin’ireo mpianatra manao fitakiana sy ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena ny hironana amin’ny fifampiresahana. Etsy ankilany, milaza ny mbola hanohy ny fihetsiketsehana ny mpianatry ny ENS anio, hihetsika anio ihany koa ny any amin'ny faritra.
Fisolokiana: Lehilahy 20 taona nisandoka ho Lietnà-kolonely no voasambotry ny vahoaka ary natolotra ny Polisy tao Arivonimamo. Hikohizan'ny mponina tao Morafeno Atsimo mihitsy izy satria sady mamaky trano sy mampihorohoro sady mangalatra tanin'olona. Vao tsy ela akory no nisy vaky trano ary ny fantatra fa izy no tompon'antoka rehefa nampitoviana tamin'ny faladian-kirarony ilay dia hita teny an-toerana. Hiatrika famotorana famotorana avy hatrany izy.
Fanolanana: Tovovavy 17 taona tratry ny fanolanana faobe sy vono tao Ankadinondry Sakay. Ny 25 desambra 2020 teo dia nirahan'ny ray aman-dreniny izy kanjo nosakanana vehivavy mpivarotena iray sy lehilahy 3 hafa namany. Novonoin'ireto farany ary rehefa tsy nahatsiaro tena dia nanao ny filan-dratsiny izy 3 lahy. Efa voasambotry ny zandary izy 4 mianadahy ary natolotra ny fampanoavana ary naiditra amponja vonji-maika. Efa nahazo fitsaboana sahaza kosa ilay vehivavy.
Plan Emergence Madagascar : Hatolotra ho fantatry ny rehetra amin’ny 19 janoary 2021 Ny 19 janoary 2021 no hatolotra ho fantatry ny rehetra na ny mpamatsy vola, na ireo mpampiasa vola na ireo sehatra rehetra hiaraka hanatanteraka ny asa ny Plan Emergence Madagascar na ny PEM.
RN44 : Hisy fahatapahan-dalana ny zoma 08 janoary Noho ny asa fanamboarana ny lalana eo amin'ny PK151+500 Ankazotsaravolo, amin’ny lalam-pirenena faha-44 (RN44) mampitohy an'Ambatondrazaka sy Moramanga, dia ho tapaka ny fifamoivoizana eo amin'io lalana io ny zoma 08 janoary 2021 amin'ny 09 ora maraina ka hatramin'ny 05 ora hariva. Miantso ny mpampiasa lalana ny Minisiteran'ny Fanajariana ny tany sy ny Asa vaventy mba samy hanaiky sy hanaraka ireo toromarika izay omen'ireo tompon'andraikitra eny an-toerana.
18-oct-2021 15-oct-2021 13-oct-2021 12-oct-2021 11-oct-2021 08-oct-2021 07-oct-2021 06-oct-2021 05-oct-2021 04-oct-2021 29-sept-2021 22-sept-2021 20-sept-2021 17-sept-2021 16-sept-2021 15-sept-2021 14-sept-2021 13-sept-2021 10-sept-2021 09-sept-2021 08-sept-2021 07-sept-2021 06-sept-2021 03-sept-2021 02-sept-2021 01-sept-2021 31-août-2021 30-août-2021 27-août-2021 25-août-2021 24-août-2021 20-août-2021 19-août-2021 17-août-2021 16-août-2021 11-août-2021 10-août-2021 09-août-2021 06-août-2021 05-août-2021 04-août-2021 03-août-2021 02-août-2021 30-juil-2021 29-juil-2021 28-juil-2021 26-juil-2021 23-juil-2021 22-juil-2021 21-juil-2021 19-juil-2021 16-juil-2021 15-juil-2021 13-juil-2021 12-juil-2021 09-juil-2021 08-juil-2021 07-juil-2021 06-juil-2021 05-juil-2021
© 2020 Copyright: Tia Tanindrazana